Alienware wuxuu ku socdaa gaariga Ubuntu | Laga soo bilaabo Linux
Alienware wuxuu ku socdaa gaariga Ubuntu
Aamiin wixii dad badani u malayn karaan, Ubuntu wuxuu leeyahay wax aad u wanaagsan, taasna waa inay horayba ugu xun tahay qaar, iyo shaydaanka kuwa kale, ayaa qaadanaya GNU / Linux meelihii laga yaabo inuusan waqti dheer imaan.
Ma ogtahay Alienware? Hubso haddii .. Haddii aad tahay gammer khayaano ah waa inaad ogaataa inay kani yahay Rolls Royce kombiyuutarada ciyaarta, iyo gaar ahaan waxay leeyihiin dhar yar in aan jeclaan doonno, kaliya maahan qaabeynta isafgaradkiisa, laakiin sidoo kale waa lagu dalban karaa Ubuntu. Waan arki karnaa qaabeyntiisa halkan.
Gracias Canonical, meheraddaada leh Dell way farxeen nafta .. 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Alienware wuxuu ku socdaa gaariga Ubuntu
In kasta oo ay dhaawacdo ubuntu badan oo lidka ku ah, kani waa midhihii go'aannadii u degsanaa ee in badan lagu dhaliilay. War weyn.
Waxaan u maleynayaa isku mid 🙂
Hagaag, waxaad kaheli doontaa wax yar inta udhaxeysa iibsashada taas iyo sameynta pc-ga gaarka loo leeyahay, marka laga reebo iibsashada shisheeyaha inay lamid tahay inaad lacag badan qarash gareyso, waxay kaa qaadayaan sida mac, calaamadda ...
Dabcan ma iibsado shay ka mid ah kuwaas ama ku xidhan, in kasta oo x51kani aad uga jaban yahay qiimaha caadiga ah ee summaddan.
Gabi ahaanba waa isku raacsan yihiin, waa sida iibsashada kombiyuutarka hp, lenovo ama nooc kale ...
... inkasta oo sanadihii la soo dhaafay aan xaqiiqsaday in marar badan ay jiraan kuwa wax badan ka yaqaana barnaamijyada softiweerka, horumarka, injineerada, falanqeeyayaasha, iwm ... laakiin leh cabsida / cabsida qalabka qaarkood, laakiin si aad ah uma cadayn fikradaha qaybaha ay ka kooban yihiin kombuyuutar, aadna ugu yar fudud hal.
Kufiican Ubuntu iyo Gnu / Linux.
** oo aan aad uga cadayn sida la isugu geeyo waxaan doonayay inaan qoro.
Waxaan hadda gartay in boggu uusan oggolaanayn sixitaanka faallooyinka.
Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in Shiinaha uu noqonayo Nidaamka Howlgalka rasmiga ah (u sheeg qofka wax yeelaya)
Aan aragno intee in le'eg ayay ku qaadanaysaa inta ololayaashu soo muuqanayaan.
By habka, ma jiraa qof yaqaan sida loo rakibo uumi on debian 64 xD?
Puff, waxaan ahay sidaada oo kale, dhibaatooyinka xagga uumiga ku dhaca Debian 64 bit.
Ku jawaab Francisco_18
SolydXK kaliya ayaa ku daray: http://solydxk.com/update-pack-impressions-iii-steam-installer/
Waa inaad fiirisaa haddii aad isticmaaleyso bakhaarka SolydXK waad rakibi kartaa.
Haye, waa qiime aad u wanaagsan, yaa qiyaasi lahaa sanad uun ka hor? XEERARKA UBUNTU !!
Waxay u egtahay aniga mid weyn. Waxaad badbaadinaysaa naftaada isku xirnaanta iyo dhibaatooyinka iswaafajinta. Qiimo macquul ah ayaan diyaar u ahaan lahaa inaan ku bixiyo kombuyuutar la soo ururiyey wixii Linux ah, ha noqdo Ubuntu, Suse ama wax kale. Waqtigan xaadirka ah ma helayo barta PC gamer oo leh linux maxaa yeelay dalabka Steam waa mid aad u xaddidan marka loo eego Windows. Waxaan rajaynayaa oo maalin maalmaha ka mid ah istuudiyaha waawayn ay halis ugu jiraan inay u soo baxaan nidaamka penguin, ama ugu yaraan ay la soo baxaan dekedo. Ciyaaraha madadaalo ee 'indie indie' ima soo jiitaan gabi ahaanba.
Waxay iigu egtahay dibin daabyo aniga, sida ay kor ku yiraahdaan kan ayaa sameeya.
Wanaagsan u Canonical!.
Aynu aragno haddii Steam iyo cayaaraha guud ahaan ay ku sii socdaan Linux!
Haa, laakiin wixii aan ka aqrin karay waxay u timid sida "OS dheeri ah", waxaan fahamsanahay inay tahay labo boot ... waxa fiicnaan lahaa ayaa ah inay siiyaan ikhtiyaarka ah in daaqadaha aysan si dhab ah u imaanin ... oo ay ka jaraan shatiga qiimaha .. dabcan 🙂
Ku jawaab Fabri
Waan ku faraxsanahay warkan, oo lagu daray nooca 13.04 ayaa loogu talagalay ciyaaraha
Imtixaanadii aan qaaday 13.04, ma aqaan .., laakiin iskudhiska laftiisa ayaa aad uga degganeyn, nvidia.
Weli xoogaa waa ay ka deggan tahay wixii aan isku dayay laakiin way sii deyn doonaan dhawaan waxaan rajeynayaa inay wax yar fiicnaato, in kasta oo aan aad ugu faraxsanahay kde, runtu waxay tahay ma jiro desktop ka fiican.
waa maxay warka wanaagsan, in yar oo ka mid ah Linux loo sii daayo adduunka.
Waxaan dhisay pc bilo ka hor isla faahfaahintaas isla markaana waxay u soo baxday si isku mid ah, haddii aan waxyar sugi lahaa waxaan qabanayaa mid ka mid ah kuwan, nooca shisheeyaha ah ee aan waligay jeclaa 🙂
U heellan Toledo oo ka eegaysa shabakadda !!!
Sideed u aragtaa kooxaha Montain? Waxaan ula jeedaa tayada / qiimaha kumbuyuutarrada gacanta.
Waxay sidoo kale bixiyaan GNU / Linux.
Aasaasiga Koowaad ee DNS-ka LAN ee Debian 6.0 (IV)
Xabad joojinta Ubuntu